(L) နူးညံ့သော - ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူအမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အပျက်သဘောရှုမြင်ရန်ပိုမိုများပြားနိုင်သည်။ အငြင်းပွားဖွယ်လေ့လာမှုအဆိုအရ (2016) - Your Brain On Porn
စိတ်ပညာရှင်ကလည်းပုံရိပ်တွေမှ desensitised ဖြစ်လာလူတွေကိုဦးဆောင်လို့ပြော
Published: 18: 01 EST, 14 ဇွန်လ 2016 |
စိတ်ပညာရှင်သိပ်ပျော့-Core ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများ၏တစ်ဦးအနိမ့်အမြင်ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါရှာတွေ့ခြင်း, လိုက်စားပုံရိပ်တွေမှ desensitised ဖြစ်လာလူတွေကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။
သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို Brighton ရှိ British Psychological Society ၏ Forensic Psychology ၏နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံတွင်ယနေ့နောက်ပိုင်းတွင်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
ယခင်လေ့လာမှုများခက်ခဲ-Core ညစ်ညမ်းအကြားလင့်များပြသခြင်းနှင့်လိင်ပြစ်မှုများ, ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးနှင့်မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီများ၏လက်ခံမှုမှအနုတ်လက္ခဏာသဘောထားများအပါအဝင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance တိုးလာကြပါပြီ။
သို့သော်သတင်းစာသတင်းစာများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာတွေ့ရှိပုံရိပ်တွေအပါအဝင်ပျော့ porn ၏ဆိုးကျိုးများ, လျော့နည်းကောင်းစွာလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
Sottie Daniels နှင့် Nottingham တက္ကသိုလ်မှ Dr. Simon Duff ကဤသုတေသနသည်မရှိခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ လူများသည်မီဒီယာ၊ ကြော်ငြာများနှင့်လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့် 'ပျော့ပျောင်းသော' တဝက်သောအမျိုးသမီးများပုံရိပ်များနှင့်ထိတွေ့ခံရဖွယ်ရှိသည်။
soft-core ပုံများနှင့်မကြာခဏထိတွေ့ခံရသူများသည်၎င်းတို့ကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်စေပြီးထိတွေ့မှုနိမ့်ကျသူများထက်သူတို့ကို“ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံ” အဖြစ်ဖော်ပြရန်နည်းပါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်
ဒေါက်တာဒက်ဖ်က '' ဒီသုတေသနအမျိုးအစားအတွက်အကြောင်းအရင်းနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့ခက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ပျော့ပျောင်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံတွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့သဘောထားကိုပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
သူက 'ဥပမာအားဖြင့်၊ အမျိုးသမီးများအပေါ်အပြုသဘောမထားသူများသည်ပျော့ပျောင်းသောအပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အမှန်တကယ်ကမ္ဘာက applications များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, အဖွဲ့ကပျော့-Core ပုံရိပ်တွေန်းကျင်မီဒီယာဆင်ဆာတင်းကျပ်စည်းမျဉ်းများအတွက်အငြင်းအခုံလည်းမရှိဟုဆိုသည်။
လိင်မှုနှင့်မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပါမောက္ခ၊ လန်ဒန်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အပူပိုင်းဒေသဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Kaye Wellings မှ '' ဒီသုတေသနဟာဒီအဆင့်မှာမပြီးသေးဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုဒါမှမဟုတ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်ချက်ချဖို့မလုံလောက်ဘူး။
'' အချက်အလက်တွေကအရမ်းနည်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီသုတေသနကိုဘယ်လောက်အထိခိုင်မာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာငါတို့မသိနိုင်ဘူး။ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သူများသည်ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများအတွက်သာဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေကိုကိုယ်စားမပြုပါ။
ဒေါက်တာ Duff က MailOnline သို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာ 'ဒီဆက်ဆံရေးဟာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုလား၊ မဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့နောက်ထပ်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့တွေ့ရှိချက်ကတော့ soft-core အကြားဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်၊ ကြော်ငြာများနှင့်စွဲမက်ဖွယ်ရာဓာတ်ပုံများနှင့်ယခင်ကသရုပ်ပြထားပုံမရသည့်ဤသဘောထားများပါ ၀ င်သည်။
သူကဆက်ပြောသည် -“ ကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းပြချက်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။
ယနေ့ Middlesex တက္ကသိုလ်မှထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရကလေးငယ်များသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး၊
သုတေသီများပိုပြီး 11 နှစ်အရွယ်မှ 16 ၏ထက်ဝက်ထက်ရာခိုင်နှုန်း 94 14 ၏အသက်အရွယ်ကမွငျလြှငျ, ဒါပေမယ့်လေးခုအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုပြီးသား 11 သို့မဟုတ် 12 အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေမြင်ဘူးနှင့်အတူ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြုံတွေ့ခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ကလေးများသူတို့ကပထမဦးစွာလက်ကိုင်စက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းကိုမြင်လျှင်ဟုစစ်တမ်းကောက်ယူသူတို့၏အမျိုးအသုံးပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖုန်းများမှတဆင့် X-rated က်ဘ်ဆိုက်များဝင်ရောက်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သုတေသီများယနေ့အထိ UK ရှိအလယ်တန်းကျောင်းကျောင်းသားအပေါ်ညစ်ညမ်းများ၏သက်ရောက်မှုမှာအများဆုံးကျယ်ပြန့်ကြည့်သောလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် 1,000 မှ 11 အသက် 16 ကလေးများထက် ပို. ဖို့ပြောခဲ့တယ်။
ကလေးများ၏ပရဟိတလုပ်ငန်း NSPCC ကမျိုးဆက်တစ်ခုလုံးသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် 'ကလေးဘဝကိုချန်ထားခြင်း' ခံရနိုင်ခြေရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
သူတို့က 'ကလေးတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံခြုံအောင်ထားခြင်းဟာအစိုးရရဲ့အဓိက ဦး စားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အော့ဖ်လိုင်းမှာလုပ်သလိုပဲ၊ အရွယ်ရောက်သူများသာကြည့်ရှုသင့်သောအွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကလေးများကြည့်ရှုခွင့်မှကာကွယ်ရန်သေချာစေလိုသည်။ '
အနုတ်လက္ခဏာ VIEWS သို့မဟုတ်အပြန်အလှန် porn ခဲပါသလား?
ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိအသက် ၁၁ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်ကြားကလေး ၁၀၀၀ ကျော်၏လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ထက်ဝက်ကျော်သည်အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
နီးပါးအားလုံး (ရာခိုင်နှုန်း 94) 14 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ရုပ်ပုံများကိုမြင်ဘူးပေမယ့်လေးအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုပြီးသား 11 သို့မဟုတ် 12 အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေမြင်ဘူး။
အဆိုပါ NSPCC နှင့်အင်္ဂလန်များအတွက်ကလေးများကော်မရှင်နာမင်းကြီးအားဖြင့်ပြန်တမ်းအဆိုပါစစ်တမ်း, ကိုလည်း (ရာခိုင်နှုန်း 28) ကထွက်ရှာအံ့သောငှါထက်ပစ္စည်းမတော်တဆ (ရာခိုင်နှုန်း 19) ကိုရှာဖွေလူငယ်တွေကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
NSPCC မှပြောကြားရာတွင်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကထိတွေ့ခြင်းဖြင့် 'သူတို့၏ကလေးဘဝကိုချန်ထားခြင်း' ခံရနိုင်ခြေရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။